Ninja Dude na Zombies 2 nkịtị ma PVP | Gam akporosis
Ninja Dude na Zombies 2, egwuregwu egwuregwu ị na-eme katana gị
Ninja Dude na Zombies 2 bụ ihe ọhụrụ ọhụụ maka gam akporo nke ahụ na-anwa ijide gị ka ị ghara ịkwụsị ịkpọ ya ogologo oge. A nkịtị na ezi ebumnuche, ọ bụ ezie na oge ụfọdụ ọ nwere ike ime gị obi abụọ n'ihi na ị maghị ihe ị ga-eme.
Ọ chọghị ndozi, mma agha ọhụrụ, skins na usoro ihe odide ahụ na-agbasawanye ọdịnaya iji nọgide na-egwu ya ọtụtụ ụbọchị. Jikere ịbụ ninja ma si otú a kpochapụ ndị isi nchịkwa ikpeazụ a na-apụghị imeri emeri bụ ndị siri ike iwepụ n'ihi enweghị ike imejọ ha.
1 A nkịtị nke ụlọ elu na ninjas
2 Kpochapu zombies niile na Ninja Dude na Zombies 2
3 Mepee 4 ninjas
A nkịtị nke ụlọ elu na ninjas
Na Ninja Dude na Zombies 2 anyị ghọrọ ezigbo ninja onye ọ tọrọ atọ n'otu ụlọ elu nke ọtụtụ puku zombies chọrọ ịrịgo na ịrịgo. Ebumnuche ya ga-ewepụ ha iji gbochie ha ịrịgo elu wee si otú a kpochapụ ya, yabụ esemokwu niile ga-adị iji nyere aka ninja ahụ nwere obi ike bụ onye na-agaghị adị mfe ma ọlị.
Iji kpochapụ zombies ndị ahụ niile na-agba ọbara, anyị ninja ị ga-enwe n'aka gị nhọrọ nke iji shurikens nke iji chebe. Ngwá agha na-agbapụ ga-eme ka ị gbaa ndị zombi ahụ niile jiri nkà gbagoo ụlọ elu ahụ. Egwuregwu ahụ dabere na ịpị otu ma ọ bụ n'akụkụ ọzọ nke ihuenyo ahụ iji malite shurikens ndị ahụ ga-ewepụ zombies ahụ.
Mana ihe agaghị adị mfe ma ọlị, ebe ọ bụ na e chere na anyị ga-echere ka ụfọdụ ọnyà anyị rụọ ọrụ ma yabụ anyị nwere ike iwepu zombies ahụ. Nke a bụ ebe obi abụọ na enweghị ụzọ ịbanye igosi n'ezie ihe anyị nwere maka anyị na imegide anyị.
Kpochapu zombies niile na Ninja Dude na Zombies 2
Otu ihe ahụ na-eme mgbe ọ pụtara mbụ onye-ishi-ozi anyi. Anyị ga-ahụ ya ka ọ na-arịgo na ịrịgo n’enweghị ike ime ihe ọ bụla. Ikekwe ọ bụ ahụhụ ihe anyị hụrụ, ebe ọ bụ na n'ọtụtụ oge, anyị enwebeghị nhọrọ nke ịpịa ya iji wepu ya. Ihere n'ihi na Ninja Dude na Zombies 2 na-ekwe nkwa, yabụ ebe anyị nọ n'ụbọchị mbido ya, anyị nwere olile anya na ha agaghị ewe oge iji mezie ụdị njehie ndị a.
Na Ninja Dude na Zombies 2 Ọnọdụ PvP adịghịkwa efu, ọ bụ ezie na anyị enwebeghị ike igosipụta ya. Ọ bụ maka iso ndị egwuregwu ndị ọzọ sọọ mpi ka ha bụrụ ndị kachasị mma. Nke a pụtara na anyị nwere ike ịnweta ụgwọ ọrụ ma si otú a hazie ninja anyị ka ọ bụrụ ihe pụrụ iche.
Enwekwara ọkụ ọkụ, ice shurikens, ọta, na usoro nkà ndị ọzọ onye ga-anọnyere anyị ka anyị wee nwee ike ịga n'ihu na-enwe ọganihu site na ọkwa. Nke ahụ kwuru, anyị anaghị eche ihu egwuregwu na-enweghị ngwụcha, mana anyị ga-enwe oke ndị iro iji kpochapụ iji gafere na nke ọzọ.
Mepee 4 ninjas
Ihe ndi ozo bu ihe ozo nke Ninja Dude na Zombies 2. Anyị nwere ike ịmeghe ruru 4 ninjas ma hazie ha na skins na nchikota di iche nke anyi ga emeghe. Ihe ndabara na-adọrọ mmasị nke anyị na-ekwu na enweghị nghọta doro anya na enyemaka anyị nwere na ihu ọma anyị. Anyị na-atụ anya na ha ga-edozi ya na onye isi ikpeazụ, ebe ọ bụ na "nwanne nna" na-arịgo na ị gaghị ahụ site na ụlọ elu ahụ ruo mgbe ọ tụbara onwe ya n'olu anyị iji kwụsị egwuregwu ahụ.
Nyochawa ya nwere nke ahụ na anyị pụta ìhè njirimara mara mma mara mma, gburugburu ebe obibi na ngbanwe ọ na-enye. Obere ihe maka ihe echebara echiche nke ọma nke ka nwere obere ọrụ ịme iji bulie ahụmịhe egwuregwu ya.
Un freemium aha a na - akpọ Ninja Dude na Zombies 2 maka gam akporo na nke ị ga - emeso ọtụtụ narị zombies chọrọ ịchụpụ gị n'ụlọ elu ahụ bụ nke kachasị baa uru na akụ gị; Karịsịa mgbe ị na-enweghị ike ịtọ ụkwụ gị n'ala wee gbapụ n'ihu ụdị mwakpo dị iche iche nke zombies. Nweela ya n'efu na Playlọ Ahịa Google maka gam akporo ekwentị mkpanaaka. Anyị na-ahapụ gị ya na nnukwu ebube nke Samurais.
Ninja Dude na Zombies 2
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Ninja Dude na Zombies 2, egwuregwu egwuregwu ị na-eme katana gị
Xiaomi kwadoro Redmi ọhụrụ nke na-agaghị enweta mmelite na gam akporo achịcha